Sidee loo ilaaliyaa mashiinka wax lagu shiido? - Dongguan Tuoyuan Sax Makiinado Co. LTD.
Sidee loo ilaaliyaa mashiinka wax lagu shiido?
Badbaadinta caadiga ah ee mashiinka wax lagu shiido ee gaasku sidoo kale aad ayey muhiim u tahay. Dhibaatooyin badan oo caam ah ayaa sababa iska indhatirka ilaalinta caadiga ah. Haddii adeegsiga mashiinka wax lagu shiido ee gantry loo isticmaalo iyadoo la raacayo hagaha hawlgalka sayniska iyo xeerarka iyo qawaaniinta ilaalinta, waxay ka hortagi kartaa in badan Shaki, yaree khasaaraha dhaqaale.
Qalabka mashiinka wax lagu shiido ee Gantry waa nooc ka mid ah qalabka wax lagu farsameeyo ee leh qalab otomaatig ah, qaab dhismeed qasan iyo qiimo qaali ah Waxay ka ciyaartaa door aan xad lahayn soosaarka warshadaha casriga ah. Si loo siiyo ciyaar buuxda waxtarka mashiinka mashiinka wax lagu shiido ee CNC, ilaalinta caadiga ah iyo dayactirka qalabka mashiinka waa in la sameeyaa. Aad ayey muhiim u tahay in la yareeyo heerka cillad bixinta mashiinka axdi qarameedka CNC
Qaab-dhismeedka guud ee mashiinka wax lagu shiido ee mashiinka wax lagu dubo wuxuu ka kooban yahay qaab-dhismeed. Qaabka gantry-ku wuxuu ka kooban yahay laba tiir, alwaaxyo, iskuxidhka alwaaxda, leerarka sare, daboolka kore iyo madaxyada caarada si ay u sameeyaan qaab adag. Alwaaxyadu waxay u socdaan kor iyo hoos iyagoo maraya marinnada hagidda tiirarka, oo qori toosan ayaa lagu qalabeeyaa alwaaxyada. Awood-badan oo shaqeeysa nooca-wan weyn oo caajis ah iyo madax furid. Iskuduwaha madaxa ee caajiska iyo macaanku wuxuu ku dhaqaaqaa tareenka hagaha tareenka wuxuuna u socdaa kor iyo hoos. Qaab dhismeedka gantry-ku wuxuu si joogto ah ugu socdaa sariirta.
Markaad ku shaqeyneyso mashiinka wax lagu shiido, shaqaaleeyaha waa inuu fahmaa heerarka qalabka mashiinka la isticmaalay. Sida awoodda mashiinka wadista dunmiiqa, kala duwanaanta xawaaraha dunmiiqa, heerka quudinta, kala-garaaca mashiinka mashiinka, awoodda qaadista ee worktable, cabirka qalabka ugu badan iyo tayada qalabka ugu badan ee ay oggoshahay ATC. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la fahmo booska heer kasta oo saliid ah iyo nooca sumcadda saliidda jilicsan loo isticmaalo.
Intaa waxaa dheer, ilaali nadaafadda deegaanka ku hareeraysan aaladda mashiinka, mashiinka wax lagu shiidaana waa inuu si joogto ah u saaraa boodhka si looga hortago marinka hawo qabowgu inuu noqdo mid aan fiicnayn, taasoo keenta heerkulka golaha wasiirrada CNC inuu aad u sarreeyo oo nidaamku uusan shaqeyn karin caadiyan. Boodhadhka wareegga iyo qaybaha korantada ee ku jira kabadhka korantada waa in sidoo kale si joogto ah loo booriyaa si loo hubiyo shaqada caadiga ah ee nidaamka korantada.
Isbedelka horumarka mustaqbalka ee warshadaynta qalabka CNC